नेपालमा आएर केहिदिन बिताएका अनुपम खेरले किन नेपालको बारेमा यस्तो लेखे ? - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / नेपालमा आएर केहिदिन बिताएका अनुपम खेरले किन नेपालको बारेमा यस्तो लेखे ?
गत ४ अक्टोबरदेखि नेपालमा भारतीय फिल्म ‘उँचाइ’ को छायांकन भइरहेको थियो । फिल्म युनिटले सेप्टेम्बर २८ मा पहिलो सेड्युल सकाएको छ । पहिलो सेड्युल अन्तर्गत दुई दिन काठमाडौं र बाँकी समय नेपालको हिमाली जिल्लामा छायांकन गरिएको हो । गत बिहीबार नेपाल सेड्युल ‘इन्ड क्ल्याप’ गरेको फिल्मका मुख्य कलाकारहरू अनुपम खेर, परिणिती चोपडा, बोमन इरानी भारत फर्किसकेका छन् । हिमाली भेगतर्फ लुक्ला र नाम्चेको सुन्दरता कैद गरेपछि फिल्मका कलाकार अनुपमले नेपालको सुन्दरताको प्रशंसा गरेका छन् ।